The Ndenye Ntuziaka Iji Ịmepụta Ịzụ ụgbọ ibu Iwu na Adobe Commerce (Magento) | Martech Zone
Ịmepụta ahụmịhe ịzụ ahịa na-enweghị atụ bụ ebumnuche bụ isi nke onye nwe azụmaahịa ecommerce ọ bụla. N'ịchụso ndị ahịa na-aga n'ihu, ndị ahịa na-ewebata uru ịzụ ahịa dị iche iche, dị ka mbelata ego na nkwalite, iji mee ka ịzụrụ ihe na-eju afọ. Otu n'ime ụzọ enwere ike isi nweta nke a bụ site na ịmepụta iwu ụgbọ ala ịzụ ahịa.
Anyị achịkọtala ntuziaka maka imepụta ịzụ ahịa iwu ụgbọ ibu in Adobe Azụmahịa (nke a na-akpọbu Magento) iji nyere gị aka ime ka sistemụ mbelata gị na-arụ ọrụ nke ọma.
Kedu ihe bụ iwu ụgbọ ịzụ ahịa?
Iwu ọnụahịa ụgbọ ala ịzụ ahịa bụ ụkpụrụ nchịkwa na-ahụ maka mbelata ego. Enwere ike iji ha mgbe itinyere coupon/koodu nkwalite. Onye ọbịa webụsaịtị ecommerce ga-ahụ ya Tinye dere bọtịnụ ka ịgbakwunye ngwaahịa na ụgbọ ahịa na ego mbelata n'okpuru obere ọnụ ahịa ọnụahịa.
Ịmepụta ma ọ bụ dezie iwu ọnụahịa ịzụ ahịa na Magento dị mfe, ọ bụrụ na ịmara ebe ị ga-ebu ụzọ gaa.
Mgbe ịbanye na dashboard nchịkwa gị, chọta ya Marketing mmanya na vetikal menu.
N'elu akuku aka ekpe, ị ga-ahụ n'ọkwá unit, na-ekpuchi katalọgụ na iwu ọnụahịa ụgbọ ibu. Gaa maka nke ikpeazụ.
Tinye Iwu ụgbọ ibu ọhụrụ
Kpatụ Tinye Iwu Ọhụrụ bọtịnụ wee dịrị njikere dejupụta ozi mbelata isi na mpaghara abụọ:
Jikwaa Koodu ndenye ego.
Na-ejuputa Ozi Iwu
Ebe a ka ị ga-ejupụta ọtụtụ ụdị ụdị.
Malite na Aha Iwu ma tinye nkowa nkenke ya. Nke Description A ga-ahụ ubi naanị na ibe Admin ka ị ghara imejọ ndị ahịa na nkọwa zuru oke wee chekwaa ndị ahụ maka onwe gị.
Kwado iwu ọnụahịa ụgbọ ala site na ịpị mgba ọkụ dị n'okpuru.
Na ngalaba webụsaịtị, ị ga-etinye weebụsaịtị ebe iwu ọhụrụ ga-arụ ọrụ.
Mgbe ahụ na-aga nhọrọ nke Otu ndị ahịa, tozuru oke maka mbelata. Buru n'uche na ị nwere ike itinye ndị ahịa ọhụrụ n'ụzọ dị mfe ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta nhọrọ kwesịrị ekwesị na menu ndọda.
Emecha ngalaba coupon
Mgbe ị na-eke iwu ụgbọ ala ịzụ ahịa na Magento, ị nwere ike ịga maka ya Enweghị ego nhọrọ ma ọ bụ họrọ a Mpempe akwụkwọ akọwapụtara nhazi.
Jupụta na Eji kwa onye ahịa ubi, na-akọwa ugboro ole otu onye na-azụ ahịa nwere ike itinye iwu.
Họrọ ụbọchị mbido na njedebe maka iwu ka amachi oge nnweta mkpado ọnụahịa dị ala
Mpempe akwụkwọ akọwapụtara
Tinye koodu coupon.
Fanye ọnụ ọgụgụ maka Na-eji Kwa coupon na / ma ọ bụ Na-eji kwa onye ahịa iji hụ na iwu adịghị oke oke.
Isi ihe ọzọ ị ga-aṅa ntị bụ nhọrọ nke mmepụta onwe coupon, nke na-eme ka o kwe omume ịmepụta koodu coupon dị iche iche mgbe ịmejupụta akụkụ ọzọ nke Jikwaa Koodu ndenye ego kọwara n'okpuru.
Ịtọlite ​​Ọnọdụ Iwu
Na ngalaba na-esonụ, ị ga-edozi ọnọdụ ndị bụ isi nke a ga-etinye n'ọrụ iwu. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịtọ ọnọdụ ụgbọ ịzụ ahịa akọwapụtara, ị nwere ike dezie ya Ọ bụrụ na ọnọdụ ndị a niile bụ eziokwu ahịrịokwu site na ịhọrọ nhọrọ ndị ọzọ karịa niile na / ma ọ bụ ezi.
pịa Họrọ ọnọdụ ka ịgbakwunye taabụ ka ịhụ menu nkwupụta ndọda. Ọ bụrụ na otu nkwupụta ọnọdụ ezughi oke, nweere onwe gị ịgbakwunye ọtụtụ nke ịchọrọ. Ọ bụrụ na ekwesịrị itinye iwu ahụ na ngwaahịa niile, gbanye naanị nzọụkwụ ahụ.
Ịkọwapụta omume iwu ụgbọ ịzụ ahịa
Site na omume, iwu ụgbọ ala ịzụ ahịa na Magento na-egosi ụdị mgbako ego. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịhọrọ n'etiti Pasent nke mbelata ngwaahịa, mbelata ego edobere, mbelata ego a kapachara maka ụgbọ ibu niile, ma ọ bụ Zụrụ X nweta Y variant.
Họrọ nhọrọ kwesịrị ekwesị na Tee menu ndọpụta taabụ wee tinye ọnụọgụ mbelata yana ọnụọgụ ngwaahịa nke onye zụrụ ahịa ga-etinye n'ime ụgbọ ibu iji jiri iwu ọnụahịa ụgbọ ibu.
Mgbanwe na-esote nwere ike ime ka ịgbakwunye mbelata ego na mkpokọta mkpokọta ma ọ bụ na ọnụahịa mbupu.
E nwere ala abụọ ọzọ fọdụrụ.
The Tụfuo iwu ndị na-esote pụtara na iwu ndị ọzọ nwere obere mbelata ego ga-etinye ma ọ bụ agaghị etinye ya na ụgbọ ala ndị na-azụ ahịa.
N'ikpeazụ, ị nwere ike dejupụta ọnọdụ taabụ site n'ịkọwapụta ngwaahịa dị iche iche dị na mbelata ego ma ọ bụ hapụ ya ka oghe maka katalọgụ dum.
Ịkpọ aha Iwu ọnụahịa ụgbọ ibu azụmahịa
Debe ya Label ngalaba ma ọ bụrụ na ị na-ejikwa ụlọ ahịa na-asụ ọtụtụ asụsụ.
The Label ngalaba dị mkpa maka ndị na-eme ụlọ ahịa ecommerce ọtụtụ asụsụ ebe ọ na-enye ohere igosipụta ederede akara n'asụsụ dị iche iche. Ọ bụrụ na ụlọ ahịa gị na-asụ otu asụsụ ma ọ bụ na ịchọghị ịmanye gị itinye ederede akara dị iche iche maka nlele ọ bụla, ị ga-ahọrọ iji gosipụta akara ndabara.
Mana iji otu asụsụ bụ ezigbo con, na-amachi oke ndị ahịa yana ibelata ọkwa ahụmịhe ịzụ ahịa n'ịntanetị. Yabụ ọ bụrụ na e-azụmahịa e-azụmahịa gị abụghị nke nwere mmasị na asụsụ, wepụta oge gị iji megharịa. wee mepụta akara iwu ka ntụgharị ntụgharị asụsụ.
Banyere ijikwa koodu ndenye ego
Ọ bụrụ n’ikpebie ime ka ọgbọ coupon koodu akpaka, ị ga-agbakwunye nkọwa ndị ọzọ akọwapụtara na ngalaba a. Fanye ọnụ ọgụgụ coupon, ogologo, usoro, prefixes/mgbakwunye koodu, na dashes na taabụ kwesịrị ekwesị wee pịa ya. Chekwa iwu bọtịnụ.
Ekele, ị na-arụ ọrụ ahụ.
NDỤMỌDỤ: Ozugbo ịmepụtara otu iwu ụgbọ ibu, ị nwere ike ịmepụta ole na ole ndị ọzọ iji mee ka mbelata ego gị bụrụ nke ahaziri iche. Iji nwee ike ịnyagharịa site na ha, ị nwere ike jiri kọlụm wepụta iwu ndị a, dezie ha, ma ọ bụ lelee ozi iwu naanị.
Iwu ụgbọ ịzụ ahịa bụ otu n'ime Adobe Commerce Njirimara Magento 2 nke ahụ ga-enyere gị aka ịmepụta uru dị mfe maka ndị ahịa gị na-edeghị akara koodu. Site n'ịgbaso usoro ndị a akọwara n'elu, ị ga-enwe ike ịme ụlọ ahịa ecommerce gị ka ọ dị mma maka ihe ndị ahịa na-arị elu, dọta ndị ahịa ọhụrụ site na ịgbasa koodu coupon n'etiti ndị na-emetụta niche ma kwalite atụmatụ ịzụ ahịa izugbe.
Tags: Adobe azụmahịaígwé ojii azụmahịa AdobeAdobe azụmahịa couponAdobe commerce coupon iwu omumeiwu akwụkwọ azụmahịa AdobeAdobe commerce shopping cart iwu omumeiwu ahịa ụgbọ ibu azụmahịa adobetinye couponiwu ọnụahịa ụgbọ ibuotúiwu ụgbọ ịzụ ahịa magentamagentomagento 2 atụmatụdere magentomagento coupon iwu omumemagento coupon iwu ọnọdụmagento coupon iwuijikwa Adobe commerce coupon oyiiwu ụgbọ ahịa